तपाईको (बुधबार जेष्ठ ११ गतेको राशीफल ) -
२०७९, ११ जेष्ठ बुधबार ०२:१७ May 25, 2022 clickonLeaveaComment on तपाईको (बुधबार जेष्ठ ११ गतेको राशीफल )
आशावादी भएर उज्यालो पक्षतर्फ हेर्नुहोस्। तपाईंको विश्वस्त आशाले तपाईंको इच्छा र चाहनाको बोधका लागि ढोका खोल्नेछ। आफ्नो परिवारको हितको लागि कठिन काम गर्नुहोस्। तपाईंको कार्य प्रेम र सकारात्मक दृष्टिद्वारा गरिएको हुनुपर्छ, तर लोभद्वारा होइन। प्रेमको शक्तिले तपाईंलाई प्रेम गर्ने कारण प्रदान गर्दछ। योग्य कर्मचारीहरुका लागि पदोन्नति वा मौद्रिक लाभ। तपाईंलाई आफ्नो वैवाहिक आनन्दको लागि एउटा अचम्मको आश्चर्य प्राप्त हुन सक्छ।
मित्रहरूले सहयोग गर्नेछन् र तपाईंलाई खुसी राख्नेछन्। अनपेक्षित बिलले आर्थिक बोझ बढाउनेछ। परिवार र साथीहरूसँग रमाइलो समय बित्नेछ। आँखाले कहिल्यै झूठ बोल्दैन र आफ्नो साथीको आँखाले तपाईंलाई साँच्चै आज केहि विशेष भन्नेछन्। आफ्ना क्यारियर सम्बन्धित निर्णयहरू आफैं गर्नुहोस् र तपाईंलाई लाभ हुनेछ। आज आफ्नो जोडीसँग शारीरिक सम्बन्ध सबै भन्दा राम्रो हुनेछ।
धेरै चिन्ता र तनाउले उँचो रक्तचाप हुन सक्छ। बच्चाहरुले अध्ययन र योजनामा ध्यान केन्द्रित गरेर भविष्यको लागि सोच्नु आवश्यक छ। आज तपाईं मुटु फुट्नबाट बच्नुहुनेछ। तपाईंले कठिन जस्ता देखिने समस्याहरूको हल गर्न आफ्ना सम्पर्कमा भएका मान्छेहरूको प्रयोग गर्न आवश्यक छ। आफ्नो ठाउँमा भएको कुनै बच्चा वा कुनै पनि बुजुर्ग नागरिकको नराम्रो स्वास्थ्यले तपाईंलाई चिन्तित बनाउन सक्छ जसले तपाईंको वैवाहिक जीवनमा सीधा असर पार्नेछ।
तपाईंको हडबडे व्यवहारले एउटा मित्रलाई केही समस्या पैदा गर्न सक्छ। आफ्नो घरमा एकता ल्याउन नजिकै समन्वयमा काम गर्नुहोस्। रोमान्सको लागि आज एकदम जटिल जीवन। तपाईंले नयाँ व्यापार साझेदारीको विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने – त्यसपछि तपाईंले कुनै पनि प्रतिबद्धता गर्नु अघि हातमा सबै तथ्य प्राप्त गर्नु आवश्यक हुनेछ। आज तपाईंको जोडीले तपाईंको आवश्यकतालाई सन्तुष्ट गर्न अस्वीकार गर्न सक्छ, जसले गर्दा अन्ततः तपाईंलाई निराशा हुन सक्छ।
आफ्नी पत्नीसँग पारिवारिक समस्या साझेदारी गर्नुहोस्। मायालु र एकअर्काको पोषण गर्ने दम्पतीको रूपमा आफूलाई पुन स्थापित गर्न र पुन: पत्ता लगाउन एकअर्काप्रति केही समय बिताउनुहोस्। तपाईंका छोराछोरीले पनि घरमा सुख र शान्ति सद्भावको तरङ्ग महसुस गर्न सकुन्। यसले तपाईंहरू दुवैलाई आफ्नो बातचीत ऐच्छिक रूपमा र स्वतन्त्रतासँग गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। बच्चाहरुले आफ्नो उपलब्धिले तपाईंलाई गर्व महसुस गराउनेछन्। तपाईंले वास्तविकताहरुसँग सामना गर्नाले प्रियलाई बिर्सिनु पर्नेछ। कामको समयमा कसैले तपाईँको योजना बिगार्ने प्रयास गर्न सक्छ – त्यसैले तपाईंले वरिपरि के भइरहेको छ भनेर सावधान हुनु आवश्यक छ। तपाईंको इच्छा अनुसार सबै कुराहरू अगाडि बढीरहेको समयमा एउटा जोडको हाँसोले दिनभरी खुशी ल्याउँछ। गलतफहमीको नराम्रो चरण पछि, साँझसम्ममा तपाईंको जोडीको प्रेम पाउनुहुनेछ।
तपाईंका बाल्यकालका सम्झनाहरुले तपाईंलाई संलग्न गर्नेछन्। यस प्रकृयामा तपाईंले आफैलाई अनावश्यक मानसिक तनाउ दिन सक्नुहुन्छ। तपाईंमा कहिलेकाहीं बालकजस्तो हुन सक्ने क्षमता नभएकोले तपाईंको एउटा प्रमुख चिन्ता र तनाउ बढी रहन्छ। बच्चाहरुले हेरचाहको माग गर्छन तर आनन्द ल्याउँछन्। आज तपाईंको मनमा आएका नयाँ पैसा बनाउने विचारको फाइदा लिनुहोस्। आफ्नो जोडीको घट्दो स्वास्थ्यको कारण तपाईंलाई तनाउ हुन सक्छ।
परिवारका केही सदस्यहरूले आफ्नो डाही व्यवहारले तपाईंलाई रीस उठाउन सक्छन्। तर आफ्नो स्वभाव गुमाउने कुनै आवश्यकता छैन अन्यथा स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ। जे निको हुन सक्दैन त्यसलाई सहनु पर्छ भन्ने बुझ्नुहोस्। तपाईंसँग आज सीमित धैर्य हुनेछ – तर कठोर वा असंतुलित बोलीले तपाईंका वरिपरि मानिसहरूलाई नराम्रो लाग्न सक्छ भन्ने ध्यान राख्नुहोस्। आज तपाईंलाई जीवनमा साँचो प्रेमको सम्झना आउँछ. चिन्ता नगर्नुहोस्, समय अनुसार सबै कुरामा परिवर्तन आउँछ, तपाईंको रोमान्टिक जीवन पनि त्यस्तै हो। तपाईंले प्रत्येक कदममा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू गर्नुभयो भने – सफलता निश्चित तपाईंको हो। आफ्नो इच्छा अनुसार आज केही काम नहुन सक्छ, तर तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीसँग सुन्दर समय बिताउनु हुनेछ।
तपाईंको बाल्य प्रकृति निस्किने छ र तपाईंमा चञ्चल मुड आउनेछ। आज सामाजिक कार्यहरुमा उपस्थित हुने मौका पाउन सक्नुहुन्छ- जसले गर्दा तपाईं प्रभावशाली मान्छेको सम्पर्कमा आउन सक्नुहुनेछ। के तपाईंले कहिल्यै अदुवा र गुलाबसँगको चकलेट सुँघ्नुभएको छ? तपाईंको प्रेमी जीवन आज त्यस्तै स्वादिलो हुनेछ। आफ्नो पक्षमा भाग्य भएकोले आज तपाईंलाई लाभ हुनेछ किनकि तपाईं ठीक ठाउँमा र सही समयमा हुनु हुनेछ। आज आफ्नो जोडीले तपाईंलाई साँच्चै विशेष केही किनिदिन सक्छन्।
आफ्नो कार्यालयबाट छिट्टै बाहिर निस्किनुहोस् र तपाईंलाई साँच्चै आनन्द आउने काम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। अनुमान वा अनपेक्षित लाभ मार्फत वित्तीय स्थितिमा सुधार आउनेछ। तपाईंले छोराछोरी वा तपाईं भन्दा कम अनुभवीहरूसँग धैर्य धारण गर्नुपर्छ। आज साँझ जिस्क्याउने कार्यमा नलाग्नुहोस्। आज काममा तपाईंले आफुलाई घृणा गर्नेलाई मात्रै ‘नमस्कार’ भन्नुभयो भने तपाईंका लागि कुराहरू साँच्चै नै सुन्दर हुनेछन्। आफ्नो प्रतिष्ठामा हानि गराउने मान्छेसँगको सङ्गत गर्न रोक्नुहोस्। आफ्नो जोडीको स्वास्थ्य गडबड भएकोले आज तपाईंको काममा केही समस्या हुन सक्छ।
कार्डमा शारीरिक रोग निको हुने सम्भावना देखिन्छ। परिवारको दायित्वलाई तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ। तपाईंले लापरवाही गर्नुभयो भने अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। प्रेम र रोमान्सले तपाईंलाई आनन्दित मुडमा राख्ने थिए। व्यापार साझेदारले सहायतापूर्ण व्यवहार गर्नेछन् र तपाईंले सँगै रहल काम पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले आजको दिनलाई उत्तम बनाउन आफ्ना लुकेका गुणहरू प्रयोग गर्नुहुनेछ। आज तपाईंका वैवाहिक जीवन मामलाका कुराहरू साँच्चै रमाइला हुनेछन्।
राम्रो स्वास्थ्यको लागि लामो पैदल यात्राको लागि बाहिर जानुहोस्। यदि तपाईंले कार्यालयमा अतिरिक्त समय बिताउनुभयो भने तपाईंको घरेलू जीवनमा समस्या हुनेछ। प्रेमले सकारात्मक चटक देखाउने छ। आईटी पेशावरहरूलाई आफ्नो उत्साह प्रमाणित गर्ने मौका प्राप्त हुनेछ। तपाईंले सफलता हासिल गर्न एकाग्रता राख्नुपर्छ र निरन्तर बढि नै काम गर्न आवश्यक छ। आज तपाईंको वैवाहिक जीवनमा मज्जा, खुशी र परम आनन्द आउनेछ।
काममा र घरमा केही दबाव पर्नाले तपाईंलाई छिट्टै रिसाउने बनाउँछ। आज तपाईंले सजिलै धन बढाउन सक्नुहुन्छ – उल्लेखनीय ऋण सङ्कलन गर्नुहुन्छ – वा नयाँ परियोजनाहरूमा काम गर्नको लागि धनको अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको खर्चिलो जीवनशैलीले घरमा तनाउ उत्पन्न गराउँछ, त्यसैले धेरै रातसम्म बाहिर बस्ने र अरूलाई धेरै खर्च गर्नबाट जोगिनुहोस्। तपाईं पहिलो नजरमा प्रेममा पर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको मालिक बहाना मन पराउँदैन – उसको रेकर्डमा सही रहन आफ्नो काम गर्नुहोस्। तपाईंको जोडीले आज तपाईंको बारेमा सबै राम्रो कुरा गरेर प्रशंसा गर्नेछिन् र तपाईंको लागि समर्पण गर्नेछिन।